बाढी केरलमा, पाठ नेपाललाई
मंगलबार, ३१ आषाढ , २०७६
नेकपा जगाउने बाटो
मुम्बईमा चारतले भवन ढल्यो, दुईजनाको मृत्युु, ४० जनाभन्दा बढी पुरिएको आशंका
दलितमैत्री बजेट कार्यान्वयनको चुनौती
प्रदेश १ मा बाढीपीडितकाे नि:शुल्क उपचार
वन कब्जाको होड
पुल जोखिमपूर्ण भन्दै जोगबनीमै रोकिए भारतबाट आउने मालवाहक साधन
खेलकुदमा पनि असारे रोग
विराटनगरका डुबान पीडितद्वारा दुई घण्टा चक्काजाम
भारतको बिहारमा बाढीकाे खतरा, चारकाे मृत्यु, १८ लाख मानिस प्रभावित
बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ६७ पुग्यो, ३० जना बेपत्ता
असारमै भरियो कुलेखानी, जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन
विकसित मुलुकमा प्रतिबन्धित विषादी नेपालमा अत्यधिक प्रयोग
याेजनाकाे मूल्या‌ंकन विवादमा वडाध्यक्षले इन्जिनियर कुटे
कुलेखानीको जलाशय खोलिँदै, वाग्मती आसपासमा सचेत रहन आग्रह
बाढीपहिरोमा परी ६५ काे मृत्यु, ३० जना बेपत्ता
चिनियाँ लगानीकाे निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योग बाढीले बगायो, पाँच मजदूर फसे
क्रिकेटको जन्मभूमि इङ्ल्याण्ड चार दशकपछि विश्वकप उपाधि, ‘अभागी’ न्युजिल्याण्ड
प्रहरी समायोजन: तह बढुवा नहुने, दुई ग्रेड थप
नेपाल–भोट युद्धः केरुङ नाकामा गोदाम घर
आपूर्ति थप सहज बनाउन चेम्बरको आग्रह
अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, २५ भाद्र , २०७५
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आकांक्षामा बाढी–पहिरो ठूलो तगारोको रुपमा अगाडि आउन सक्छ। हाम्रो नीति, रणनीति र विकास अब त्यतैतिर सोझिनु जरूरी छ।
गत जुलाईदेखि निरन्तरको वर्षा र बाढीले जलमग्न दक्षिण भारतीय प्रदेश केरल । तस्वीर: एएफपी
अरब सागरको उत्तरपूर्वी किनारमा अवस्थित दक्षिण भारतीय राज्य केरलमा यस वर्ष बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । ९४ वर्ष यताको सबैभन्दा ठूलो यो बाढीबाट राज्यका १४ मध्ये १२ जिल्ला प्रभावित भए, ४८३ कोे ज्यान गयो, सयौं गाउँ डुवानमा परे ।
५७ हजार हेक्टर (झण्डै काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफल बराबर) मा गरिएको खेती नोक्सान भयो । २० हजारभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भए । २१५ भन्दा बढी ठूला पहिरा गए, करीब १० हजार किमी सडक क्षतिग्रस्त भयो । राज्यको ८० प्रतिशत भागमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भयो ।
राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोचिन विमानस्थल नै तीन सातासम्म ठप्प हुन पुग्यो । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीले करीब रु.४ खर्ब बराबरको क्षति भयो ।
जम्माजम्मी २९ प्रतिशत जंगलले ढाकिएको केरल जलस्रोतमा धेरै धनी छ । २४४ किमी लम्बाइको पेरियार सहित यहाँ ४० भन्दा बढी नदी छन् । झण्डै ४८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र भएको केरलका अधिकांश खोला ९०० देखि १८०० मिटर उँचाइका यी पहाडबाटै निस्कन्छन् । मैदानी इलाकाका लगुनहरू (समुद्रबाट जमीनको मैदानी भाग भित्र घुसेको पानी) केरलमा पानीका अन्य स्रोत हुन् ।
भारतीय उपमहाद्वीपमा दक्षिण–पश्चिमी मनसुनको शुरूआत केरलबाटै हुन्छ । अरब सागरबाट उठेको मनसुन केरलबाट प्रवेश गरी उपमहाद्वीपको अन्य भागतिर सर्छ र बङ्गालको खाडी हुँदै नेपाल आइपुग्छ । हिउँदमा उत्तर–पूर्वी मनसुनले केही वर्षा गराए पनि वार्षिक वर्षाको झ्ण्डै ८५ प्रतिशत जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सक्रिय रहने दक्षिण–पश्चिमी मनसुनले गराउँछ ।
बर्खे पानीमा निर्भर केरलका धेरै नदी हिउँदमा साना हुन्छन्, केही त सुक्छन् नै । त्यसैले वर्षाको पानी सञ्चयका लागि १८ ठूला सहित ४३ वटा बाँध बनाइएका छन् । केरलको अर्थतन्त्रमा निकै महत्व राख्ने यी कृत्रिम जलाशयबाट बिजुली उत्पादनसँगै सिचाइ र खानेपानी आपूर्ति हुन्छ ।
पेरियार नदीमा निर्मित ६१ वर्ग किमी क्षेत्रमा फैलिएको इडुक्की सरोवर यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलाशय हो । यसपालि इडुक्कीकै जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएको थियो ।
९४ वर्षपछिको ठूलो बाढी
सन् १९०१ देखि २०१६ बीच समग्र भारतमा पानी पर्न कम हुँदै गए पनि पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा वर्षा हुने क्रम बढेको छ । केरलमा सन् २०१३ मा सबैभन्दा बढी २ हजार ५६१ मिलिमिटर पानी परेको थियो । तर लगत्तै सन् २०१५ मा खडेरीको लक्षण देखियो भने यस वर्ष भारतको झण्डै ४५ प्रतिशत भू–भागमा कम वर्षा भइरहँदा केरलमा १ जूनदेखि १५ अगष्टसम्मको अवधिमा मात्रै २ हजार ८७ मिलिमिटर वर्षा भयो ।
यो अन्य वर्षका सोही अवधिमा हुने भन्दा ३० प्रतिशत बढी होे । केरलमा ८ अगष्टमा मात्रै ३१० मिलिमिटर पानी पर्‍यो । भीषण वर्षाका कारण जलाशय भरिन थालेपछि बाँधका ढोकाहरू खोलिए । ४३ मध्ये ३५ वटा बाँधका ढोका एकैपटक खोलिएको केरलको इतिहासमै पहिलो घटना थियोे । अचानकै बाँधबाट हुत्तिएको पानी र निरन्तरको वर्षाले गर्दा बाढीले उग्र रूप लियो ।
बाढीपीडितलाई उद्दार गरी शिविरतर्फ लगिंदै ।
झण्डै ९४ वर्ष पहिले सन् १९२४ मा पनि केरलमा ठूलो बाढी आएको थियो । मलयालम वर्ष १०९९ मा पेरियार नदीमा आएको उक्त बाढीलाई ‘९९ को भीषण बाढी’ (ग्रेट फ्लड अफ नाइन्टीनाइन) समेत भनिन्छ । वायुमण्डलमा भएको चापीय स्खलन वा समुद्रमा उत्पन्न कुनै असामान्य भुमरीका कारण भीषण वर्षा भएको अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसबेला भएको ३ हजार ३६८ मिलिमिटर वर्षा औसत वार्षिक वर्षा भन्दा ६४ प्रतिशत बढी थियो । वर्षाले भरिएको मुल्लापेरियार बाँधको ढोका खोलेपछि पहिलेदेखि उर्लिराखेको खोलाको बाढी झन् उग्र बनेको थियो । यसपटक भने ठूलो वर्षा र बाँधका ढोका खोलिनु बाहेक मानव सिर्जित अन्य कारण पनि बाढी र क्षतिका लागि जिम्मेवार भइदिए ।
पर्यटन र रेमिटेन्सले केरलको अर्थतन्त्र निकै उकासेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा घर, होटल, सडक जस्ता भौतिक संरचनाहरूको व्यापक विस्तार भएको छ । त्योसँगै विगत ५० वर्षमा भएका अवैज्ञानिक भू–उपयोग र नदी किनार अतिक्रमणका कारण यस पटकको बाढीले क्षति ठूलो हुनगयोे ।
निर्माण सामग्रीको आवश्यकता पूरा गर्न केरलका पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् र वन विनाशले पहिरोको जोखिम बढाएको छ भने, नदी क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, गिट्टी–बालुवा उत्खनन् र ठूला संरचनाको अतिक्रमणले बाढीबाट हुने क्षति पनि बढेको छ ।
यसअघि नै विशेषज्ञहरूले केरलमा ठूलो वर्षा भएमा सन् १९२४ को बाढी दोहोरिन सक्ने अनुमान गरिरहेका थिए । तर, त्योभन्दा कम वर्षामै यसपटक निकै ठूलो क्षति हुनपुग्यो । प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग र अतिक्रमण नै यसका प्रमुख कारण हुन् ।
बाढी आउनुपूर्वको सूचना तथा बाँध व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी देखिए पनि केरलले बाढी पश्चात युद्धस्तरमा गरेकोे उद्धारकार्य भने प्रशंसित मात्र भएन धेरैका लागि उदाहरणीय समेत बन्यो । तीन करोड ५० लाख जनसंख्या र प्रति वर्ग किमी ८६० जनघनत्व भएको राज्यमा त्यत्रो बाढी आउँदा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या न्यून राख्न उद्धारकर्मीहरू सफल रहे, जबकि सन् १९२४ मा एक हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
जलमग्न सडक ।
करीब पाँच हजार उद्धार शिविरहरूमा दश लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई राखियो । उद्धारकार्यमा सुरक्षा निकायका सबै अंग परिचालित भए । प्रदेश सरकार, विपक्षी दल, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संस्थाले स्वयम्सेवा गरे भने सूचनाप्रविधिमा पहुँच हुने युवाहरूले वरपरको स्थितिबारे सूचना पु¥याएर सहयोग गरे ।
तर सबैभन्दा बढी प्रशंसित चाहिं आ–आफ्ना डुंगा लिएर उद्धारमा खटिएका सयौं माझीहरू भए । सुरक्षा निकायका जवानहरू पुग्न नसकेका निकै अप्ठ्यारा र दुर्गम स्थानमा फँसेका व्यक्तिहरूको उद्धार माझीहरूले गरेका थिए ।
केरल; बिहार वा उत्तरप्रदेश जस्तो हरेक वर्ष बाढीले प्रभावित हुने राज्य होइन । तैपनि उद्धार सकिंदा नसकिंदै राज्य सरकार तत्कालको सरसफाइ, सम्भावित रोगको रोकथाम, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा कार्ययोजना सहित जुटिसकेको छ ।
हामीकहाँ पनि हरेक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याइरहेको छ । पुरानामध्ये २०११ सालको बाढी अहिलेसम्मको ठूलो मानिन्छ भने क्षतिको हिसाबले १ हजार ३३६ जनाको ज्यान लिएको २०५० सालको बाढी चर्चित छ । तर २०७४ सालको बाढी इतिहासमै सम्भवतः पहिलो हो, जसमा करीब रु.६० अर्ब बराबरको क्षति भयो ।
हल विश्वविद्यालय, बेलायतका एक प्राध्यापकको भनाइ यहाँनिर सान्दर्भिक छ– जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढीको सामना गर्न हाम्रा शहर र समुदायहरूको तयारी न्यूनस्तरको छ । प्राध्यापकको भनाइ र २०७४ सालको बाढीको परिप्रेक्ष्यमा हामीले केरलबाट केही पाठ सिक्नै पर्छ ।
बाढीको बदलिंदोे चरित्र र हाम्रो क्षमताः विगतका भन्दा २०७४ सालको बाढी दुई कारणले फरक थियो । एक, पूर्वको बिरिङ्ग खोला (झपा) देखि पश्चिमको बबईसम्म एकै पटक बाढी आयो । पहिले यस्तो भएको थिएन । दोस्रो, २०७४ सालको वर्षा तराईमा बढी केन्द्रित रह्यो । यतिसम्म कि चुरेक्षेत्रमा त्यत्रो पानी पर्दा समेत थोरै उत्तरमा रहेको कुलेखानीको इन्द्रसरोवर पूरा भरिएन ।
वर्षाको समयमा सामान्यतया बादल यौटा निश्चित मार्गमा निरन्तर अघि बढ्छ, तर २०७४ सालमा बादल केही दिन तराई माथि रोकिएको देखियो । त्यसै वर्ष अमेरिकाको टेक्ससमा आएको ‘हार्भि’ नामक आँधीका बेला पनि बादल एकै स्थानमा रोकिएको पाइएको थियो । पूर्व र पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा विकसित उच्च चापका कारण हार्भि टेक्सस राज्यमा आइपुगेपछि अघि बढ्न सकेन ।
२०७४ सालको बाढी र अहिले केरलमा आएको बाढीले सिकाएको पाठ भनेकै विपत् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारी अहिलेको भन्दा धेरै गुणा चुस्त हुनु नितान्त जरूरी भइसकेको छ भन्ने हो ।
फलतः एकै क्षेत्रमा तीन दिनसम्म पानी पर्‍यो । यो वर्ष केरलमा पनि मौसमको चरित्र उस्तै देखियो । बङ्गालको खाडीमा हुनुपर्ने न्यून चाप केही दक्षिण सरेकोले मनसुनी हावा उत्तर मोडिन सकेन, बादल केरल भन्दा अघि बढेन । फलस्वरुप, मनसुनकै मार्गमा रहेको सँगैको कर्नाटक राज्यमा सामान्य भन्दा कम वर्षा हुँदा केरलमा ९ दिनसम्म भारी वर्षा भइरह्यो ।
एकै क्षेत्रमा वर्षा केन्द्रित रहेका पछिल्ला यी तीन उदाहरणले वर्षाको चरित्रमा फेरबदलको संकेत गरेको छ । यो परिवर्तन ग्लोबल वार्मिङका कारण भएको अनुमान गरिएको छ ।
यदि यसै गरी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बादल स्थिर भएर निरन्तर वर्षा भइरह्यो भने यहाँको अवस्था कति भयावह होला ? अनुमान पनि गर्न सकिन्न । सामान्य वर्षामा समेत पहिरो जाने हाम्रा पहाडमा ठूलो वर्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसै पनि २०७२ सालको ठूलो भूकम्पले थर्किएर कमजोर बनेका छन् पहाडहरू, धेरै भागमा चिरा परेका छन् ।
अविरल वर्षाका कारण २८ असारमा भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न सडक र बस्ती । तस्वीरः बिक्रम राई
नेपालका पहाडहरू झण्डै आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्र मात्र नभई महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल र जैविक विविधताको भण्डार क्षेत्र पनि हुन् । जलविद्युत् परियोजनाहरू यहीं छन् र संभावना पनि यहीं छ । यदि केरल वा टेक्सस जस्तै भीषण वर्षा यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पुग्यो भने त्यसबाट हुने क्षतिले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछ ।
६० अर्बको नोक्सान गराएको २०७४ सालको बाढी र अहिले केरलमा आएको बाढीले सिकाएको पाठ भनेकै विपत् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारी अहिलेको भन्दा धेरै गुणा चुस्त हुनु नितान्त जरूरी भइसकेको छ भन्ने हो ।
सूचना व्यवस्थापन र प्रयोगः केरलको मुल्लापेरियार बाँध निर्माणबारे पहिलो पटक छलफल भएको झण्डै १०५ वर्षपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो । हामीकहाँ पनि छलफलमा रहेका कोशी उच्च बाँध जस्ता भविष्यमा थुप्रै संरचना नबन्लान् भन्न सकिन्न ।
सन् १९२४ मा मुल्लापेरियार बाँधको ढोका खोलिएकोले बाढी ठूलो भएको थियो । ९४ वर्षपछि पनि बाँध सञ्चालन क्षमता उस्तै कमजोर देखियो । ठूलो वर्षा हुँदा बाँधको ढोका कुन बेला खोल्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्षा शुरू भइसकेपछि बाँध खोल्दा जोखिम झनै बढ्छ, मौसमको पूर्वानुमान गरेर पहिल्यै यो काम गरिनुपथ्र्यो ।
भारतीय मौसम विभागले १४–१५ अगष्टमा केरलमा ‘भारी’ देखि ‘अत्यन्त भारी’ वर्र्षाको चेतावनी दिएको दाबी गरे पनि राज्य सरकार भने बेलैमा मौसम भविष्यवाणी नभएकोले बाँध व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भनिरहेको छ । मौसम भविष्यवाणीको आधारमा पहिले नै बाँधको ढोका खोलेर पानी घटाउन सकेको भए भीषण वर्षाको धेरै पानी बाँधमै जम्मा गर्न सकिन्थ्यो र बाढीले त्यति विघ्न नोक्सान गर्ने थिएन ।
हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान क्षमतामा हाल निकै सुधार गरिएको छ र भविष्यमा अझै सुदृढ बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर त्यस्ता सूचनालाई प्रयोग गर्ने संस्थाहरूकोे क्षमतामा पनि त्यतिकै सुधार हुनु जरूरी हुन्छ, चाहे त्यो विपत्को लागि होस् वा कृषि र पर्यटनका लागि । सूचनाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन भएन भने जतिसुकै चुस्त र वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध भए पनि उपयोगविहीन हुन्छ ।
भू–उपयोगको नियमनः हाम्रो भू–उपयोग नीति; भू–स्वरुप र स्थानीय जलविज्ञानका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ । नदी किनारमा बसोबास, वन क्षेत्र वा सार्वजनिक स्थल मासेर उद्योग, सडक जस्ता संरचना निर्माण, जलाधार क्षेत्रभित्र ढुङ्गाखानी सञ्चालन जस्ता स्थानीय जलचक्रलाई अवरोध गर्ने कार्य निर्वाध भइरहेका छन् ।
बालुवा खानी अर्काे उदाहरण हो जसले जलचक्रको कुरै छाडौं, भू–स्वरुप नै परिवर्तन गरेको छ । बालुवाका ढिस्का जथाभावी खोस्रिएका छन् । हामीले अहिले गरिरहेका कामले भोलि कस्तो समस्या ल्याउला भन्ने आकलन गर्न नसक्दा भविष्यको तयारी गर्ने हाम्रो क्षमता बढ्न सकेको छैन । यसै वर्र्ष भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी ताजै छ ।
तसर्थ उपलब्ध सूचनाको प्रयोग गर्ने क्षमतामा ठूलो वृद्धिका साथै त्यसका आधारमा भू–उपयोग नियमन हुनु जरूरी छ । भर्खर स्थापित हाम्रा प्रदेशका सीमा निर्धारण नदी बेसिनको आधारमा नभई राजनीतिक आधारमा भएकोले एकभन्दा बढी प्रदेश ओगट्ने जलाधार क्षेत्रभित्र वर्षाको पानी र बाढी व्यवस्थापन गर्ने विषय झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
टिष्टुङ्ग क्षेत्र (प्रदेश ३) मा ठूलो वर्षा हुँदा वागमती र लालबकैया नदीले रौतहट र सर्लाही (प्रदेश २) मा क्षति पुर्‍याउँछन् । प्रदेश ३ ले गर्नुपर्ने भू–उपयोग नियमनमा प्रदेश २ ले कसरी निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ?
यदि केरलको जस्तै नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बादल स्थिर भएर निरन्तर वर्षा भइरह्यो भने यहाँको अवस्था कति भयावह होला ? अनुमान पनि गर्न सकिन्न ।
झूटो सुरक्षा अनुभूतिः जापानीहरू सुनामीले क्षति पुर्‍याएको स्थानमा सीमाङ्कन गरी भावी पुस्तालाई क्षतिबारे सतर्क गराउँछन् । तर हाम्रोमा ‘बूढापाकाले भनेको’ भन्ने बाहेक पहिले कहाँसम्म बाढी आएको थियो भन्ने जानकारी न कुनै नक्शामा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ, न जमीनमा नै ।
यस्तो जानकारी सुरक्षित राख्ने हो भने त्यस्ता ठाउँमा महत्वपूर्ण संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्छ । तर, हामीकहाँ बाँध र तटबन्धले दिने अस्थायी सुरक्षा अनुभूतिलाई स्थायी समाधान मान्ने गरिएको छ । तटबन्ध बाढी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने त प्रमाणित नै भइसकेको छ ।
केरलका प्रायः सबै ठूला नदीमा बाँध बनेपछि बढेको सुरक्षा अनुभूतिले गर्दा गत ५० वर्षमा नदी किनारमा बस्ती विकासदेखि उद्योग आदि स्थापना हुँदै गए जुन अहिले गलत सावित भएको छ । केही वर्र्षको अन्तरालमा आउने बाढी झनै खतरनाक हुन्छ, जसबाट बाँध र तटबन्धले पूर्ण सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखियो ।
अर्थात्, धेरै वर्षदेखि बाढी आएको छैन भनी ढुक्क हुने हैन बरु अझै ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने ठानेर चनाखो भएर तयारी अवस्थामा रहनु केरलले दिएको महत्वपूर्ण शिक्षा हो ।
ग्लोबल वार्मिङका कारण वर्षाको बदलिंदो चरित्र र त्यसअनुसार बाढी–पहिरोको व्यवस्थापनमा बढ्न नसकेको हाम्रो क्षमताले गर्दा आगामी दशकहरूमा हामीले अझै ठूला चुनौती व्यहोर्नुपर्नेछ ।
त्यसमा पनि ‘निश्चित अनिश्चितता’ ले घेरिएका जलवायु परिवर्तन निर्देशित बाढी पहिरोका घटना कहिले कहाँ हुन्छ भन्न नसकिने हुँदा हाम्रो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षामा बाढी–पहिरो ठूलो तगारोको रूपमा अगाडि आउन सक्छ ।
हाम्रो नीति, रणनीति र विकास अब त्यतैतिर सोझिनु जरूरी छ । मौसमको पूर्वानुमान, सूचनाको प्रयोग गर्ने क्षमतामा सुधार, विपत्ति आइसकेपछि जोगिने तयारीले क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्ने केरलले देखाएको छ । त्यसबाहेक राहत, पुनर्निर्माणमा पनि केरलले देखाएको तदारुकता हाम्रो लागि सिकाइको विषय बन्नुपर्छ ।
(उपाध्या जलाधारविद् हुन् ।)
मंगलबार, ३१ आषाढ , २०७६ नेकपा जगाउने बाटो
मंगलबार, ३१ आषाढ , २०७६ मुम्बईमा चारतले भवन ढल्यो, दुईजनाको मृत्युु, ४० जनाभन्दा बढी पुरिएको आशंका
मंगलबार, ३१ आषाढ , २०७६ दलितमैत्री बजेट कार्यान्वयनको चुनौती
मंगलबार, ३१ आषाढ , २०७६ प्रदेश १ मा बाढीपीडितकाे नि:शुल्क उपचार
खेलकुद खेलकुदमा पनि असारे रोग
रिपोर्ट विकसित मुलुकमा प्रतिबन्धित विषादी नेपालमा अत्यधिक प्रयोग
रिपोर्ट ‘ट्रेकिङ ट्रेल’ पनि ढलान !
बुझ्नै बाँकी बोजो कमल मादेन
हरित शहरको नाराः के रोप्ने, के नरोप्ने ? हिमालखबर
बल्ल नेपाल देखिन, सुनिन थालेको छ : प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्री हिमालखबर
आइतबार, २९ आषाढ , २०७६ भानुजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रकवि घिमिरेलाई अभिनन्दन
आइतबार, २९ आषाढ , २०७६ आदिकवि भानुभक्तको २०६औँ जन्मजयन्ती आज
शनिबार, २१ आषाढ , २०७६ ‘म्याजिकल’ अन्तर्दृष्टि
शुक्रबार, २० आषाढ , २०७६ माथिल्लो डोल्पाः साहसिक पदयात्राको रोमाञ्च